Cawaaqibta wasakhowga biyaha | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Cawaaqibta wasakheynta biyaha
Jarmal Portillo | 27/04/2022 12:00 | Deegaanka
Dunidu waxa ay in badan inna xasuusinaysaa in aanay nololi ka jirin biyo la’aan, sida abaaro isa soo taraya oo khatar ku ah biyaha la cabo ee ka jira meelo kala duwan oo caalamka ah. Noocyada kala duwan ee wasakhowga biyaha ayaa keena tayada kheyraadkan qaaliga ah inay xumaato, taas oo ka dhigan khatarta caafimaadka meeraha. Nasiib darro, hawlaha aadanaha aawadood, biyaha iyo wasakhowga waa laba eray oo isku dhow. Dad badan ayaan si fiican u aqoonin Cawaaqibka wasakhowga biyaha.
Sababtan awgeed, waxaanu maqaalkan u huray inaanu idiinka warramo cawaaqibka ugu waaweyn ee wasakhowga biyaha iyo noocyadooda.
1 Noocyada wasakhowga biyaha
1.2 Biyaha oogada
1.3 nuugista ogsijiinta
1.4 Wasakhowga dhulka hoostiisa
1.5 wasakhowga microbial
1.6 Wasakhowga Lalaalay
1.7 Wasakhda kiimikaad ee biyaha
1.8 Wasakhowga nafaqada
2 Cawaaqibta wasakheynta biyaha
3 Cawaaqibka wasakhowga biyaha badda
4 Sida looga fogaado cawaaqibka wasakhowga biyaha
Noocyada wasakhowga biyaha
Daadinta saliidda waxay had iyo jeer saameyn ku leedahay duurjoogta deegaanka ama nolosha biyaha, laakiin suurtagalnimada faafitaanka waa mid aad u weyn.
Saliiddu waxay ku dheggan tahay baalasha shimbiraha badda, taas oo xaddidaysa awoodooda dabaasha ama duulista oo dila kalluunka. Korodhka saliida daadanaya iyo daadinta badda ayaa sababay wasakhowga badda. Muhiim: Saliiddu kuma milmi karaan biyaha waxayna samayn doontaa lakab qaro weyn oo saliid ah oo biyaha ku jira, oo xiiqda kalluunka iyo xannibaadda iftiinka dhirta biyaha ee sawir-qaadista.
Biyaha dushiisa waxa ka mid ah biyaha dabiiciga ah ee laga helo oogada dhulka, sida webiyada, harooyinka, balliyada, iyo badaha. Maaddooyinkani waxay la kulmaan biyaha oo milaan ama jidh ahaan isku daraan.
Waxa jira nooleyaal ku jira jidhka biyaha. Kuwaas waxaa ka mid ah noolaha aerobic iyo anaerobic. Biyuhu inta badan waxa ay ka kooban yihiin nooleyaal, aerobic ama anaerobic, taas oo ku xidhan maaddooyinka noole deg-degga ah ee ku dhex jira biyaha.
Microbes-ka xad-dhaafka ah ayaa cuna oo cuna ogsijiinta, taasoo keenta dhimashada noolaha hawada iyo soo saarista sunta waxyeelada leh sida ammonia iyo baaruud.
Wasakhowga dhulka hoostiisa
Biyaha roobka ayaa ciidda ka sii daaya sunta cayayaanka lagu dilo iyo kiimikooyinka la xidhiidha oo dhulka gala, iyaga oo wasakheeya biyaha dhulka hoostiisa ku jira.
Waddamada soo koraya, dadku waxay si toos ah uga cabbaan biyaha aan la daweyn ee webiyada, togagga, ama ilo kale. mararka qaarkood way dhacdaa wasakhda dabiiciga ah oo ay sababto nooleyaal sida fayrasyada, bakteeriyada iyo protozoa.
Wasakhowgan dabiiciga ahi waxa uu sababi karaa cudurro halis ah oo bani aadamka ah iyo dhimashada kalluunka iyo noocyada kale.
Dhammaan kiimikooyinka si fudud uguma milmi karaan biyaha. Kuwaas waxaa loo yaqaan "particles." Maaddooyinka noocaan ah waxay dhaawici karaan ama xitaa dili karaan nolosha biyaha.
Wasakhda kiimikaad ee biyaha
Waxaa la wada ogsoon yahay sida ay warshaduhu u isticmaalaan kiimikooyinka si toos ah loogu shubo ilaha biyaha. Agrochemicals ayaa si xad dhaaf ah loogu isticmaalay beeraha si loo xakameeyo cayayaanka iyo cudurada Waxay ku dhamaadaan wabiyo, sunta nolosha biyaha, baabi'inta noolaha iyo khatarta nolosha aadanaha.
Marar badan waxaynu nidhaahnaa biyuhu waxay leeyihiin nafaqooyin caafimaad u leh nolosha, sidaa darteed looma baahna in la nadiifiyo. Laakin helidda bacriminta beeraha iyo warshadaha ee biyaha la cabbo ayaa badashay sawirka oo dhan.
Qaar badan oo ka mid ah biyaha wasakhda ah, bacrimiyeyaasha, iyo wasakhda waxaa ku jira xaddi badan oo nafaqo ah kuwaas oo kor u qaadi kara algae iyo korriinka haramaha biyaha, ka dhigi kara mid aan la cabbin, iyo xitaa xira filtarrada.
Biyo-baxa bacriminta ee wasakhowga dhul-beereedka biyaha wabiyada, durdurrada, iyo harooyinka ilaa jidka badda. Bacrimiyeyaasha ayaa qani ku ah nafaqooyinka kala duwan ee ay u baahan yihiin nolosha dhirta, iyo natiijada ka soo baxda biyaha macaan waxay xumeeyaan dheelitirka dabiiciga ah ee nafaqooyinka lagama maarmaanka u ah dhirta biyaha.
Biyaha ayaa ku wasakhaysan dawada aan ku shubno musqusha ama saliidda aan ku shubno saxanka. Qashinka lagu tuuray badda iyo webiyada ayaa tusaale kale ah. Isla sidaas oo kale ayaa ku dhacda Microplastics, kuwaas oo uruurintooda badweynta ay si degdeg ah u kordhayaan. Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, 8 milyan oo baco ah ayaa ku dhammaada badda sannad kasta, taas oo beddeleysa nolosha hab-nololeedyada deegaanka ee ku dhex nool.
Sida saxda ah, ururkan caalamiga ahi waxa uu wasakhowga biyaha ku macneeyaa wasakhda biyaha ee ay ka kooban yihiin isbedelo ilaa ay noqdaan kuwo aan la isticmaali karin. Biyaha wasakhaysan macnaheedu waa in aadanuhu isticmaali karin kheyraadkan qaaliga ah. Ka sii dariddani waxay ka dhigan tahay khatar halis ah meeraha waxayna ka sii dari doontaa oo kaliya saboolnimada kuwa ugu nugul.
Wasakhowga biyuhu waxay saamayn xun ku leeyihiin ilaalinta deegaanka iyo caafimaadka meeraha. Qaar ka mid ah cawaaqibka ugu muhiimsan ee noocyada kala duwan ee wasakhowga biyaha waa: burburinta noolaha, faddaraynta silsiladda cuntada, oo ay ku jiraan ku faafidda walxaha sunta ah ee cuntada iyo yaraanta biyaha la cabbo.
Keydka biyaha dhulka hoostiisa ayaa bixiya 80% dadweynaha adduunka. 4% kaydkaas ayaa wasakhoobay. Dhammaan noocyada wasakhowga biyaha, kuwa ugu muhiimsan waxay la xiriiraan dhaqdhaqaaqa warshadaha ka dib Dagaalkii Labaad ee Adduunka iyo ilaa maantadan la joogo. Tusaale ahaan, sannad kasta in ka badan 450 kiiloomitir cubic oo biyo wasakh ah ayaa lagu daadiyaa badda. Si wasakhdaas loo khafiifiyo, 6.000 kiiloomitir cubic oo dheeraad ah oo biyo macaan ah ayaa la isticmaalay.
Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay, 2 milyan oo tan oo bulaacad ah ayaa ku qulqula biyaha adduunka maalin kasta. Isha ugu muhiimsan ee wasaqowga waa la'aanta maamul ku filan iyo daadinta qashinka dadka, warshadaha iyo beeraha.
Qaar ka mid ah dareerayaasha ayaa wasakhayn kara meelo badan oo biyo ah iyagoo yareynaya. Tusaale ahaan, Kaliya 4 litir oo shidaal ah ayaa wasakhayn kara ilaa 2,8 milyan oo litir oo biyo ah. Xayawaanka biyaha nadiifka ah ayaa dabar go'aya shan jeer ka dhaqsiyaha badan xayawaanka berriga.
Cawaaqibka wasakhowga biyaha badda
Meesha ugu wasakhaysan badda waa badda Mediterranean-ka. Xeebaha Faransiiska, Isbaanishka iyo Talyaaniga ayaa ah qaar ka mid ah gobollada ugu wasakhaysan dhulka. Ku xiga liiska waa Kariibiyaanka, Celtic, iyo Waqooyiga badaha. sabab? Qashinka badda, waa mid ka mid ah dhibaatooyinka wasakhda ugu daran ee badda dhexdeeda. In ka badan 60% qashinka yimaada waa caag. 6,4 milyan oo tan oo caag ah Waxay ku dhamaadaan badda sanad walba.
Haddii aynaan jecleyn meereheena oo aynaan qaadin tallaabo lagu baabi'inayo wasakhowga biyaha, baddu waxay uga gudbi kartaa xulafadayada si loo yareeyo saameynta isbeddelka cimilada ee cadawgeena. Meelahan waaweyn ee biyuhu waxay u dhaqmaan sidii weel dabiici ah oo loogu talagalay kaarboon laba ogsaydh ee jawiga. Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in la yareeyo gaaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo saameynta xun ee dhibaatada cimilada.
Hadda saynis yahano iyo khubaro kala duwan oo ka kala socda caalamka ayaa nooga digaya in hadii aan la iska bedelin caadooyinkan oo aan joojino sii daynta gaasta wasakhaysan, in nolosha baddu aanay sii jiri doonin heer kulka sare ee badaha, taasina ay noqon doonto arin kale oo loo baahan yahay in la qaato. xisaabaadka.
Dhinaca kale, Biyo-yarida iyo walbahaarka biyaha waa dhibaatooyin kale oo ina soo food saara. Marka loo eego qiyaasaha ay samaysay barnaamijka deegaanka ee Qaramada Midoobay, sanadka 2025, kala badh dadka meeraha ku nool waxa ay wajihi doonaan yaraanta kheyraadkan qaaliga ah. Dhibic kasta oo biyaha wasakhaysan maanta waxay ka dhigan tahay biyo lumay berrito.
Sida looga fogaado cawaaqibka wasakhowga biyaha
Ka fogaanshaha wasakheynta biyaha waxay ku jirtaa gacmahayaga. Kuwaani waa qaar ka mid ah waxyaabaha aan sameyn karno si aan u baabi'inno joogitaanka wasakhda ee biyaheena:
Iska yaree qiiqa kaarboon dioxide
Jooji isticmaalka sunta cayayaanka iyo noocyada kale ee kiimikooyinka khatarta ku ah dabeecadeena
Nadiifinta biyaha wasakhda ah
Ha ku waraabin dalagyada biyo wasakhaysan
Horumarinta kalluumeysiga waara
Meesha ka saar balaastiigga hal mar la isticmaalo
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto cawaaqibka wasakhowga biyaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Cawaaqibta wasakheynta biyaha
Noocyada dhirta korontada